२०७६ बैशाख ६ शुक्रबार १५:४३:००
काठमाडौं । १२खरी बुक्सले आयोजना गरेको राष्ट्रव्यापी खुला कथा प्रतियोगितामा बीना थिङ तामाङ प्रथम भएकी छन् । प्रतियोगितामा सहभागी ४४५ कथामध्येबाट तामाङकृत ‘ब्याड भाले प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट (प्रथम) कथा बनेको हो । तामाङले एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कारका अतिरिक्त शिल्ड र प्रमाणपत्र हात पारेकी छन् ।
प्रतियोगितामा लक्ष्मण वियोगी द्वितीय भएका छन् । वियोगीको ‘टाउको’ शीर्षकको कथाले ६० हजार नगद पुरस्कारका अतिरिक्त शिल्ड र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्‍यो । वियोगी पत्रकार पनि हुन् । प्रतियोगितमा सुमित्रा न्यौपाने तेस्रो भइन् । न्यौपानेको ‘बार्दली’ शीर्षकको कथाले ४० हजार रुपैयाँ नगद, शिल्ड र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्‍यो ।
प्रतियोगिताका लागि झण्डै नौ सय कथा प्राप्त भएको थियो । त्यमध्ये ४४५ कथा मापदण्डभित्र परेका थिए ।
लोककथा, ग्राम्य कथाबाट शुरू भएको कथा–उपन्यास मुद्रण युगमा आइपुगिसकेकाले यसले मानव जातीलाई अझै फाइदा पुर्‍याउने विचार राखे ।
पछिल्लो समय कथा– उपन्यासमा ज्यादा प्रयोग हुन थालेको बताउँदै उनले भने, “साहित्यमा नवीन प्रयोग त आवश्यक छ छ । तर, यसले समाजलाई भुलभुलैमा राख्ने भन्दा पनि मानसिकता बदल्ने र मानसिक पुनर्निर्माण गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।”
उनले नेपाली समाज सानो भए पनि साहित्य–सिर्जनाका लागि कच्चा पदार्थको खानी नै रहेको अथ्र्याए ।
“हाम्रो समाज सानो छ, तथापि विविधतायुक्त छ । अनेक जाती, भाषाभाषी यहाँको विशेषता हो । यी सबै साहित्यका कच्चा पदार्थ बन्न सक्छन्,” उनले भने । पछिल्लो समय नेपाली समाजले भोगिरहेको राजनीतिक उतार–चढाव, हिंसात्मक संघर्ष, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलगायतका संक्रमण पनि कथा–उपन्यासका मूल विषय हुनसक्ने उनले औँल्याए ।
१२खरी अनलाइनका प्रधानसम्पादक प्रतीक प्रधानले दशकैपिच्छे साहित्यको आयाम बदलिएकाले प्रतियोगितामा छानिएका २५ कथाले पछिल्लो कालखण्डको प्रतिनिधित्व गर्ने विचार राखे । “सयमसँगसँगै साहित्य सिर्जना पनि बदलिँदै जाँदो रहेछ । साहित्य पढ्दा त्यो समयको बारेमा जान्न बुझ्न सघाउ पुग्दो रहेछ,” उनले भने ।
१२खरी बुक्सले कथा चयनका लागि आन्तरिक र बाह्य गरी दुई प्रकारको मूल्याङ्कन कमिटी गठन गरेको थियो । आन्तरिकमा राजेन्द्र पराजुली, गोविन्द अधिकारी, लेनिन बञ्जाडे, राजेश खनाल र अक्षर काका रहेका थिए भने बाह्यमा डा. दयाराम श्रेष्ठ, डा. अर्चना थापा तथा नयनराज पाण्डे रहेका थिए ।
लोकप्रिय विधा हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय नेपालमा कथा लेखनप्रति आकर्षण कम भएको हुनाले प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको आयोजक संस्थाले बताएको छ । प्रतियोगितामा अग्रजदेखि समकालीन तथा युवापुस्तासमेतको सहभागिता रहनु उल्लेखनीय पक्ष हो । प्रतियोगिताले ‘ट्यालेन्ट हन्ट’को काम गर्नुका साथै लुकेर बसेका प्रतिभाको खोजी गरेको छ । यसले आगामी दिनमा नेपाली कथा लेखनमा नयाँ अध्याय थप्ने विश्वास आयोजक संस्थाले गरेको छ ।
कार्यक्रमको आरम्भमा समकालीन नेपाली कथा लेखन तथा प्रतियोगी कथाहरुका बारेमा बहस गरिएको थियो । बहसमा डा. दयाराम श्रेष्ठ, डा. अर्चना थापा, नयनराज पाण्डे, राजेन्द्र पराजुली सहभागी थिए । मोडरेटरको भूमिका अक्षर काकाले निर्वाह गरेका थिए ।
१२खरी बुक्सले हरेक वर्ष साहित्यका विविध विधामा प्रतिष्पर्धाको आयोजना गर्ने १२खरी अनलाइनका प्रधान सम्पादक प्रधानले प्रतिवद्धता जनाए । ‘उत्कृष्ट कथा २०७६’ समकालीन नेपाली कथाको एउटा स्पष्ट अनुहार हुन पुगेको १२खरी बुक्सका सम्पादक राजेन्द्र पराजुलीको भनाइ छ ।
प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्ने कथाकार बिना थिङ तामाङलाई प्रमुख अतिथि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ट्रफी प्रदान गरे भने डिश होमका अध्यक्ष हेमराज ढकालले मेटल प्रमाणपत्र तथा एनएमबी बैंकका सीइओ सुनील केसीले नगद पुरस्कारको चेक प्रदान गरे । त्यस्तै दोस्रो पुरस्कार प्राप्त गर्ने कथाकारलाई प्रमुख अतिथिले ट्रफी, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले मेटल प्रमाणपत्र प्रदान गरे भने तेस्रो हुने कथाकारलाई प्रमुख अतिथिले ट्रफी र सशस्त्र प्रहरी गणका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले मेटल प्रमाणपत्र प्रदान गरे ।
दुबैलाई एनएमबी बैंकका सीइओ सुनील केसीले नगद पुरस्कारको चेक प्रदान गरे । त्यस्तै उत्कृष्ट २५ कथाकार मध्ये २२ जना कथाकारहरुलाई मेटल प्रमाणपत्र प्रमुख अतिथि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रदान गरे भने रोयल्टी वापतको चेक प्रायोजक संस्था हिमाल स्टीलका कार्यकारी निर्देशक अभिक ज्योतिले प्रदान गरे ।
कार्यक्रममा बाह्रखरी मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेश्वर आचार्यले प्रमुख अतिथि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई सम्मान गरेका थिए भने प्रबन्ध सम्पादक राजेश केसीले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । उनले बाह्रखरी मिडियाले गरेको कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउने व्यक्ति, विज्ञापनदाता, उपस्थित पाहुनालगायतलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।
तस्बिरमा बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता